Beach Soccer – “CAN 2018”: lasa nanafika an’i Mozambika ny Barea | NewsMada
Beach Soccer – “CAN 2018”: lasa nanafika an’i Mozambika ny Barea
Hanafika an’i Mozambika ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2018), taranja beach soccer. Vonona ny ekipam-pirenena, hanainga amin’ity alakamisy ity.
Hiatrika ny lalao mandroso eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana hiatrehana ny dingana famaranana amin’ny “Can 2018”, taranja beach soccer, ny Barea de Madagascar. Fihaonana, hifandonana amin’i Mozambika. Hampiantrano ny fihaonana voalohany, ny alahady 9 septambra ho avy izao, ny Mozambikanina.
Efa fantatra avokoa ireo mpilalao 10 mirahalahy mandrafitra ny ekipam-pirenena. Mbola hita ao anatin’ny Barea avokoa ny ankamaroan’ireo mpilalao efa nandrombaka ny tompondakan’i Afrika, tamin’ny taona 2015. Anisan’ireny ry Toky, mpilalao mendrika tamin’izany fotoana izany. Eo koa i Tiana (Tsiliva) ary i Ymelda sy i Giovanni ary i Jhorialy, mpiandry tsatoby, sy i Pierralit.
Nambaran-dRamarolahy Solofo, mpanazatra, fa mpilalao feno traikefa amin’ny filalaovana baolina ambony fasika avokoa ireo hoentina atsy Mozambika ary manana ny vatana afaka mifanandrina tsara amin’ny Afrikanina. Tsiahivina fa mbola hiatrika ny lalao miverina ihany koa ry zalahy, ny 23 septambra ho avy izao. Fihaonana, hotanterahina any amin’ny torapasik’i Mahajanga.
Hiatrika ny dingana famaranana, hatao any Egypta ny volana desambra ho avy izao, izay mahazo isa be indrindra, eo amin’ny Barea de Madagascar sy i Mozambika, aorian’ireo lalao roa mandroso sy miverina ireo. Tanjon’ny Barea de Madagascar, amin’ity, ny hamerina ny anaram-boninahitra eo am-pelatanan’izy ireo indray.